Syria oo lagu cambaareeyay Dilka tobanaan Rayid ah oo isugu soo baxay Mudaharadyadii Shalay – SBC
Syria oo lagu cambaareeyay Dilka tobanaan Rayid ah oo isugu soo baxay Mudaharadyadii Shalay
Posted by editor on July 2, 2011 Comments
Kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquqda Aadanaha iyo weliba Hay ado caalami ah ayaa cambaareeyay Dilka in kabadan 24 qof oo maalintii Jimcaha la sheegay in ay Ciidamada Syria toogteen.
Banaabaxyadii Maalintii Jimcaha dhacay,gaar ahaana loogu magac daray Jimcihii Tagitaanka ayaa ahaa Kii ugu xooganaa ee mudooyinkan ka dhaca Dalkaasi Syria.
Magaalada Ximis,Darba iyo Tuulooyin hoostaga Gobolka Edlab ee Waqooyiga Syria ayaa ahaa kuwa ugu badan ee ay ka dheceen khasaaraha dhimasho ee Banaabaxyadii shalay.
Sarkaal ka tirsan Kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa u sheegay wakaalada wararka AFP in ay diiwaan galiyeen in ka badan 20 qof oo maalintii shalay ay toogteen Ciidamada Syria,iyadoona ay hayaan muuqaalo muujinaya rasaasta ay Ciidamadu ku furayaan dadka rayidka ah.
Taleefishinka Syria ayaa dhankiisa baahiyay war ay Dowladu ku sheegtay in ay dagaal kula gashay kooxo hubaysan,kuwaasi oo rasaas kala horyimi deegaanada Waqooyi ee Syria,waxaana ay sheegtay in ay kusoo qabqabatay weerarkaasi in kabadan 10 ka tirsan kooxihii hubaysnaa.
Dowlada Syria waxaa ay marar hore ku celcelisay in ay jiraan Kooxo hubaysan oo dibada laga soo abaabulayo,kuwaasi oo qas iyo jaahwareer ka dhalinaya dalkooda,waxaana ay sheegtay in ay ka qaadayso talaabo aanay cidina uga Amar qaadanayn,ayna soo afjarayaan.